Ahoana ny fisafidianana takelaka | Vaovao momba ny gadget
Tao anatin'izay taona lasa izay dia nanjary fitaovana ankafizin'ny ankohonana maro ny takelaka raha ny amin'ny fifandraisana amin'ny Internet, ny fidirana amin'ny tambajotra sosialy, ny fanaovana fikarohana amin'ny Internet, ny fandefasana mailaka ... Eo an-tsena izao ananantsika izao modely samihafa, rafitra fandidiana samihafa, habe samihafa, vidiny samihafa ...
Raha mino ianao dia post-pc ary tonga ny fotoana hividianana takelaka hanaovana asa isan'andro isan'andro na avy aiza na aiza nefa tsy miankina amin'ny solosaina, ity misy torolàlana ho an'ny ny fomba hisafidianana takelaka. Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ny tombony sy fatiantoka ny tsirairay amin'ireo rafitra fiasa sy modely hita eny an-tsena.
1 Haben'ny efijery
2 Rafitra fandidiana
3 Fifanarahana / Ecosystem an'ny fampiharana
5.1 Takelaka Android
Eo an-tsena isika izao dia manana ny haben'ny efijery hafa azontsika ampiasaina manomboka amin'ny 8 santimetatra ka hatramin'ny 13. Ny haben'ny efijery dia iray amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe tsy maintsy raisintsika, satria raha mitady fahaizan-javatra isika ary mamindra azy na aiza na aiza, dia vao mainka kely kokoa no tsara kokoa.
Raha te hamindra azy isika fa te-hahazo tombony indrindra amin'izany dia mety ho ilay maodely 13-inch no safidy tsara indrindra, indrindra raha te-hahatratra ny fikasantsika isika soloy ny solosainantsika na ny solosaina finday tsy mahafoy ny haben'ny efijery.
Ny rafitra miasa dia lafiny iray hafa izay tsy maintsy raisintsika. Na dia marina aza fa ny Android no rafitra fiasa be mpampiasa indrindra eto an-tany, raha miresaka takelaka ianao dia tsy nahomby ilay zavatra ary betsaka tokoa, satria ny ankamaroan'ny rindranasa ny interface-dry zareo dia tsy namboarina hampiasaina amin'ny takelakas, zavatra mitranga amin'ny ekosistra finday iOS an'ny Apple.
Ho fanampin'izany, iOS dia manome antsika fampiharana marobe isan-karazany, fampiharana namboarina tamin'ny efijery lehibe kokoa izay ahafahantsika manararaotra an'io tombony io amin'ny finday. Apple dia manome ny mpampiasa iPad fiasa manokana toy ny efijery mizara na multitasking, asa fototra sasany tokony hananan'ny takelaka.
Fahatelo, ary na dia maro aza no tsy mihevitra azy ho takelaka, dia tsy maintsy ataontsika ihany koa ny Microsoft Surface. Ny tombony lehibe atolotry ny Microsoft Surface range dia hita amin'izany Izy io dia tantanan'ny Windows 10 amin'ny endriny feno, mba hahafahantsika mametraka rindrambaiko misy amin'ny solosaim-birao sy solosaina finday tsy misy fetrany.
Windows 10 dia mampiditra kinova ho an'ny takelaka mety indrindra amin'ny Surface, izay ahafahantsika mifanerasera aminy toy ny hoe takelaka Android na iPad fa miaraka amin'ny hery sy ny fahaiza-manaon'ny PC atolotra antsika.
Fifanarahana / Ecosystem an'ny fampiharana
Araka ny efa nolazaiko teo amin'ny teboka teo aloha, Android tsy ny ecosystem fa raha takelaka no tadiavintsika hanoloana ny solosaina misy antsika satria ny isan'ny fampiharana mifanentana dia tena voafetra. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia toa nitahiry ireo fitaovana ireo ny mpikaroka fikarohana mba hifantoka amin'ny finday avo lenta, hadisoana izay handany vola be amin'ny fotoana maharitra.
Apple manamboatra saika Rindrambaiko mifanentana amin'ny iPad iray tapitrisa, fampiharana izay manararaotra ny halavany sy ny sakan'ny efijery ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia io no fampiharana azontsika apetraka amin'ny iPhone, ka tsy mila mandoa vola roa heny isika.
Microsoft miaraka amin'ny Surface no safidy mety indrindra raha tsy afaka miaina tsy misy fampiharana birao isika izay efa nahazatra antsika ary raha tsy misy dia tsy afaka miasa tsara.
Ny takelaka tantanan'ny Android, dia mametraka ny kojakoja mitovy aminy hitantsika ao amin'ireo finday avo lenta tantanan'ny rafitra fiasa iray ihany, izay ahafahantsika mampifandray ny foibe mankany amin'ny seranan-tsambo USB-C hampifandray karatra fahatsiarovana, tsato-kazo USB, kapila mafy na na monitor aza raha manohana an'io fiasa io.
Tamin'ny fanombohana ny iPad Pro, ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanitatra ny isan'ny safidy azontsika ampifandraisina nefa tsy mila mamaky ilay boaty foana. ny iPad Pro 2018 dia nanolo ny fifandraisana amin'ny varatra nentim-paharazana tamin'ny port USB-C, seranan-tsambo izay azontsika atao ny mampifandray mpamaky karatra, monitor, kapila mafy na hub hahafahana mampifandray fitaovana isan-karazany.
Ny Surface an'ny Microsoft dia mitovy amin'ny solosaina finday tsy misy kitendry, Ka noho izany dia manolotra antsika ireo fifandraisana mitovy amin'ny solosaina finday, izy io no fitaovana manome antsika fahaiza-manao lehibe indrindra rehefa mampifandray izay fitaovana ilaina hanitarana ireo asa atolotray antsika.
Ny maodely takelaka avo lenta rehetra dia ahafahantsika mampifandray klavily sy pensilihazo hitaona ny efijery. Ho fanampin'izay, ireo maodely tantanan'ny Windows, toy ny Samsung's Galaxy Tab ary ny Microsoft's Surface koa andao hifandray totozy isika, mba ahazoana aina kokoa ny fifandraisana amin'ny rafitra miasa.
Tao anatin'izay taona lasa izay dia nitombo be ny vidin'ny finday avo lenta, indraindray nihoatra ny 1.000 euro. Rehefa nandeha ny taona dia nitombo koa ny vidin'ny takelaka noho ny fitomboan'ny tombony azony omena antsika.
Ny tontolo iainana ny takelaka misy Android, araka ny efa nolazaiko tetsy ambony tena voafetra izany Satria ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia nijanona tsy niloka tamin'ity tsena ity, namela ny ankamaroany ho an'i Apple, izay amin'ny fahamendrehany manokana no tompony.
Ireo maodely izay manome ny vidiny tsara indrindra eny an-tsena amin'izao fotoana izao dia atolotry ny fakan-tabilao galaxy Samsung, avy amin'ny Samsung izay manome azy ireo ho antsika modely samihafa amin'ny 180 euro, vidiny azontsika atao eo am-pelatanantsika takelaka fototra hanaovana ireo zavatra efatra izay matetika ataontsika amin'ny ekipanay, toy ny fijerena tamba-jotra sosialy, fitsidihana tranonkala iray, fandefasana mailaka ...
Apple dia manolotra ny faritry ny iPad 9,7-inch, ny iPad Mini, ny iPad Pro 10,5-inch ary ny iPad Pro 11 sy 12,9-inch. Ny Apple Pencil dia tsy mifanaraka amin'ny laharana iPad Pro fotsiny, ka raha ny hampiasa azy io no heverintsika dia tsy maintsy raisintsika an-tsaina izany rehefa mividy Apple iPad. Ny vidiny fototra ho an'ny maodely iPad rehetra dia toy izao:
iPad Mini 4: 429 euro ho an'ny maodely 128 GB misy fifandraisana Wi-Fi.
iPad 9,7 santimetatra: 349 euro ho an'ny maodely 32 GB misy fifandraisana Wi-Fi.
IPad Pro 10,5-inch: 729 euro ho an'ny maodely 64 GB misy fifandraisana Wi-Fi.
IPad Pro 11-inch: 879 euro ho an'ny maodely 64 GB misy fifandraisana Wi-Fi.
IPad Pro 12,9-inch: 1.079 euro ho an'ny maodely 64 GB misy fifandraisana Wi-Fi.
Microsoft's Surface dia manome antsika sasany andinindininy izay mety ho hitantsika amin'ny ankamaroan'ny solosaina finday avo lenta eny an-tsena, saingy miaraka amin'ny fahaiza-manao natolotry ny solosaina tsy misy kitendry, fitendry izay tsy maintsy vidintsika misaraka raha tadiavintsika izany, toy ny maodely iPad rehetra.
Famaritana lehibe momba ny Surface:
processeur: Intel Core m3, andiany faha-5 Core i7 / i7.
Fahaiza-mitahiry: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Ny maodely mora indrindra, tsy misy fitendry, dia manomboka amin'ny 899 euro, (Intel Core m3, 4 GB RAM ary 128 GB SSD) ny vidiny izay toa avo ho an'ny takelaka iray, saingy izany raha raisintsika ny fahaizany manolotra antsika, na ho an'ny fampiharana na ho an'ny fivezivezena, dia vidiny mihoatra ny antonony ho an'ny takelaka misy an'io fahefana io.
Raha ivelan'ny teti-bolanao ny Microsoft Surface, fa te hanohy hitazona ilay hevitra atolotra anao izy, afaka mifidy ny Ambina mandeha, takelaka misy fampisehoana ambany kokoa amin'ny vidiny ambany, na dia mety hianjera ho an'ireo mpampiasa sasany mitaky be kokoa aza izany. Ny Surface Go dia manomboka amin'ny 449 euro miaraka amin'ny fitehirizana 64 GB, RAM 4 GB ary processeur Intel 4415Y.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » takela-bato » Ahoana ny fomba hisafidianana takelaka
Ahoana ny fomba hanafaka ny toerana ao amin'ny iCloud